Yakazara kuturika yemagetsi gomo bhasikoro | ebike Shuangye
musha Products electric bike electric mountain bike Full suspension electric mountain bike integrated wheel A6AH26-SM
Bhatiri: Lithium Bhatiri 36V / 48V 10Ah Viga mufuremu
Chimiro: Aluminium Chiedza Kurema chiwanikwa Chigadziko
Ratidza: LCD Screen Control
Akamedura: 160 Mechanical Disc akamedura hurongwa
Tire: 26 * 1.95 inch magnesium alloy wheel
Pamberi chiedza: 3W yakajeka mberi kwechiedza ne USB inotakura ganda
Full suspension electric mountain bridge integrated
Magnesium alloy yakasanganiswa vhiri yakashandiswa pakumiswa kuzere electric mountain bike. Gadzira bhasikoro remakomo emagetsi zvakanyanya fashoni uye kutasva kunzwa kwakasiyana nematauri emagetsi emakomo bhasikoro. Nakidzwa nerwendo rwusiri-kukwira uye nekukurumidza nekukurumidza uye kukubatsira kuenda kana kufamba kwezuva nezuva
250W / 350W / 500W mushure mokutengesa motokari, sarudza imwe iyo yakakodzera iwe nzvimbo inogara.
36V / 48V 9AH / 10AH yakavharwa yakavharwa iyo yakakwira pamusika wepasi bhasikoro. Inotsigira kubviswa uye nyore nyore.
Kushamiswa kwemashure kwemashure kunopa humwe hutsinye hunotyisa pamugwagwa wakaoma.
Kuregererwa kwakakwana kwegomo bhasikoro bhani bhati, unogona kuona guru LCD digital screen, imwe yezvakagadzika uye zvigadziriswa, bell uye thumb throttle. Zvose izvi zvinogona kukubatsira kuti uwane mabhasikoro.
160 mechanical disk brake system yakaiswa pakusimiswa kwakakwana kwegomo bhasikoro. Inogona kutsigira zvose-kutarisa kwemamiriro ekunze, kusambofunganya pamusoro pemapuddles, mudha uye mumigwagwa yakanyoro uye kupisa kana kutonhorera. Nguva dzose inomisa bhasikoro nemasimba ako mashoma.
Inobviswa 3W yakajeka kumberi mwenje uye USB yekuchaja posvo pabhasikoro. Imwe irikuita kuve nechokwadi chekutasva kwako maonero ekufamba kweusiku, imwe iri kugadzirisa dambudziko kana foni yako ichipera simba remagetsi.
Iko kusungirirwa kwemagetsi bhasikoro kushandisa kenda 26 * 1.97 dhayi uye magnesium alloy integrated wheel design.
Zvimwe bhasikoro remagetsi: 26 inch inopisa kutengesa gomo yemagetsi bhasikoro, 48v yakakwira chinzvimbo mountian ebike, yakazara kuturika yemagetsi mtb, 26 inch fat tire bike yemagetsi, Yakajairika yemagetsi gomo bhasikoro
Tags:magetsi gomo bhasikoro electric bike mountain
Prev: 48V500W gomo rebhazikoro gorosi A6AD26
Next: 29 * 2.35 inch magetsi anobatsira bhasikoro gomo revakuru A6AH26